.: Ko Moe's Electronics Notes :.: Microcontroller & Peripheral Devices
Microcontroller & Peripheral Devices
Microcontroller တွေမှာ အခြားသော peripheral device တွေနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့အခါ Protocol တွေသုံးရပါတယ်။ UART, SPI, I2C, FIFO ဆိုပြီး Protocol အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ အသုံးအများဆုံးက SPI ပါ။ ဘာလို့သုံးရသလဲဆိုတော့ communicate လုပ်ရတာလွယ်လို့ပါ။ standard လည်းနည်းလို့ပါ။ Peripheral Device တွေကတော့ ...
- Converters (ADC, DAC)
- Memories (EEPROM, Flash)
- Sensors (Temperature, Pressure)
- Others (Signalmixer, Potentiometer, UART, CAN controller, USB devices, Amplifier)
SPI ဆိုတာ Serial Peripheral Interface သူ့မှာ Master နဲ့ Slave ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ Microprocessor ကအမြဲတမ်း Master ဖြစ်ပြီး peripheral တွေက Slave ပါ။4Channels သုံးရပါတယ်။ SCLK (Slave Clock), MOSI (Master Out Slave In), MISO (Master In Slave Out), SS (Slave Select) တွေပါ။ အောက်ကပုံက Master & Slaves ချိတ်ဆက်တဲ့ပုံပါ။ Slave က တစ်ခုတည်းလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။
Mode မှာ ၄ ခုရှိပါတယ်။ Mode 0, 1, 2,3တွေပါ။ CPOL (Clock Polarity) နဲ့ CPHA (Clock Phase) ပေါ်မှာမူတည်ပြီး Mode ကွဲပြားပါတယ်။ Operation အစမှာ Clock က Low ဆိုရင် CPOL=0 ပါ။ High ဆိုရင် CPOL=1 ပါ။ နောက်ပြီး Data bit က Clock ရဲ့ Falling Edge မှာ Sampling လုပ်တယ်ဆိုရင် CPHA=0 ဖြစ်ပြီး Raising Edge မှာ Sampling လုပ်တယ်ဆိုရင် CPHA=1 ပါ။ အောက်မှာ Mode တွေခြားနားပုံကိုပြထားပါတယ်။
အခုလို အတိုကောက် ခွဲမှတ်လို့ရပါတယ်။
SPI Mode CPOL CPHA
Default Mode က0ပါ။ ဒါမှမဟုတ် သက်ဆိုင်တဲ့ Device က သတ်မှတ်ထားတဲ့ Mode ရှိနေမှာပါ။ Software မှာ Mode ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာ မလိုပါဘူး။
MSB = Most Significant Bit ရှေ့ဆုံး Data bit
LSB = Last Significant Bit နောက်ဆုံး Data bit
Posted by ကိုမိုး at Monday, September 17, 2007
Labels: Hardware, Programming, Software, SPI
Anonymous Sunday, 23 September 2007 at 1:22:00 AM SGT
ကိုမိုး .. http://engineersformyanmar.blogspot.com မှာ ၀င်ရေးစေချင်ပါတယ် ။
အီးမေးလ်အက် ပေးပါ ။ ကျမ အင်ဗိုက် လုပ်လိုက်ပါမယ် ။
တခုသတိထားမိတာ.. ကိုမိုးရေးထားတာတွေက နုတ်စ်သဘောအနေနဲ့ အပေါ်ယံနည်း၂ဆန်နေပါတယ် ။ ဒီ့ထက် တော့ပစ်တခုကို အတွင်းပိုင်းထိ ရေးပြနိုင်မယ်ဆို ၊ ပိုထိရောက်မယ် ထင်ပါတယ် ။
ခုလိုရေးထားတာတွေလည်း ကောင်းလှပါပြီ ။ ကျမကတော့ အီလက်ထရွန်းနစ်ပိုင်း လုပ်နေပေမယ့် ၊ ဗမာလိုပြန်ရေးဖို့ မဖြစ်နိုင်သေးလို့း) ။ အတွေ့ အကြုံတွေ နောက်ပိုင်း ဖလှယ်ကြတာပေါ့ ။
G Programming with LabVIEW - (2)
The Most Favourite FIVE posts
Testing Serial Communication with Hyper Terminal
Application Software with GameBoy
Kaleid_1-2-3 Image Converter for DOS Programs
Sunx Laser Marker
Open/ Short Tester VS Phoe Thant (1)
Shwe Kay & Phoe Thant